Ireo mpanamboatra kalitao lehibe dia manandrana mitsangatsangana kiraro vaovao amin'ny lehilahy
Vanim-potoana: fararano sy ririnina
Synthetic pu ambony
kiraro an-tongotra mandeha an-tongotra mandeha an-tongotra mahazatra kapa ho an'ny lehilahy
Vanim-potoana vaovao misy fomba mitambatra loko 3.
Pu synthetic, mesh miaina ambony
Tokana vita amin'ny fingotra maharitra.
Sarina marika marika farany ho an'ny lehilahy
Ny tombo-kase kokoa sy ny fantsom-bozaka avo lenta miaraka amina FlyKnit teknika ambony dia manome mitaingina aina kokoa. Ny fanidiana ny lace-up dia mirakitra kofehy boribory mba hifanaraka akaiky. Ny vozon'akanjoko sy ny lela bootie dia manome fiononana manodidina ny ombelahin-tongonao. Fampirimana misintona mora miala eo amin'ny vozon'akanjo. Insole azo esorina. Ny valim-panafody midsole dia manohitra ny famoretana ary mamerina ny angovo isaky ny dingana mampiasa fitaovana kely kokoa ho an'ny famindra mora kokoa sy malefaka kokoa mandritra ny fihazakazahana. Ny fingotra mitombo amin'ny outsole dia manome tanjaka sy durabilit ...
Mpivarotra tampony Amazon amin'ny kiraro lehilahy fanao kiraro kiraro vita pirinty kiraro mainty yeezy ho an'ny lehilahy
Midira amin'ny fahazarana mahazatra amin'ny fampiofanana isan'andro sy mpampiofana gym. Mesh sy flyknit ambony miaraka amina modely quilted ho an'ny rivotra. Fanidiana ny dantelina nentim-paharazana miaraka amin'ny fehin-kitrana voahidy mba hitazomana ny tongotra manontolo mandritra ny fiofanana mahery sy ny lanja mavesatra maimaimpoana. Lela malemy sy vozon'akanjo. Fananganana bootie ary esory ny vodiny ho an'ny tadiny haingana sy mora. Fametahana harato azo tsofina ary insole azo atokisana. Manome fahatsapana voajanahary ny savony midsole. Fitaovana ivelany misy fantsom-bozaka ...
2020 mafana Mivarotra fomba Knit ambony lamaody kiraro fanatanjahan-tena Kavina fanatanjahan-tena kiraro fanatanjahan-tena Kiraro Yeezy
Mihazakazaha am-pofoana am-pahatoniana miaraka amin'ny fanampian'ny flyknitting kiraro fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy. Cushioning: valiny maivana sy malefaka. Fanakatonana lace-up. Ny vozon'akanjo malefaka sy ny lela dia manome fampiononana manodidina ny ombelahin-tongonao. Ny filanjana manenjana dia manome fahatsapana toy ny sock. Insole azo esorina. Ny cushioning react dia manohitra ny famoretana ary mamerina angovo isaky ny dingana. Ny talantalana voditongotra dia manome fahamarinan-toerana ho anao. Ny outsole amin'ny fingotra dia manome tanjaka. Fampahalalana momba ny vokatra Andininy: 5030 Anaran'ny vokatra: fivarotana mafana knea ambony namboarina snea ...
Kiraro fanatanjahan-tena malemilemy kiraro fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Mitsambikina ary manadino ny lalanao mankany amin'ny teboka iray amin'ny kiraro kiraro kiraro. Ny fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny fahombiazan'ny maivana sy ny faharetana raha ny outsole kosa dia manome ny faharetana amin'ny akanjo avo lenta. Ny flange flyitit ambony dia manome endrika sy fahatsapana malama. Fananganana bootee milamina marevaka tsy misy fotony mba hahazoana fampiononana tsara sy tsy manam-paharoa. Fanakatonana lace-up. Fonosana lamba vita amin'ny rivotra. Insole foam namboarina. Ny lavany feno EVA dia manome toky maharitra sy mahazaka faharetana. Fampahalalana momba ny vokatra A ...
Kiraro fanatanjahan-tena mora namboarina kiraro fihazakazahana kiraro fanatanjahan-tena mahazatra
Ho an'ny hazakazaka maivana, eny an-kianja izay tsy mahafoy ny faharetana ilainao amin'ny fiofanana sy fifaninanana be. Sneakers knit mamorona ambony mateza avo izay mitazona fampisehoana maivana sy maivana. Fanakatonana lace-up. Sockliner lamba azo velomina. Insole foam namboarina. Ny midsole polyurethane amin'ny halavany dia manome fihenam-bidy mahomby amin'ny famonosana valinteny. Ny outsole vita amin'ny fingotra dia manome ny faharetana amin'ny akanjo avo lenta. Fampahalalana momba ny vokatra Andininy: 5027 Anaran'ny vokatra: ...
Kiraro fanatanjahan-tena lehilahy vaovao, kiraro fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy kiraro fanatanjahan-tena amin'ny taona 2020
Soraty amin'ny làlambe na amin'ny isan'andro manao ny kiraro mihazakazaka vaovao ny lovanao. Mpialoha lalana: React Legend. Karazana fanohanana: tsy miandany. Cushioning: valiny maivana sy malefaka. Surface: Làlana. Ny tongotra lavitra kokoa sy ny ambony kokoa dia manome fiakarana mahaliana kokoa. Maivana, miaina mesh ambony. Fanakatonana lace-up. Ny vozon'akanjo sy ny lela voaroy dia manome fampiononana manodidina ny voditongotrao. Fampirimana misintona mora miala eo amin'ny vozon'akanjo. Insole azo esorina. Tokana phylon maivana. Fampahalalana momba ny vokatra Article No. .: 5028 Pr ...
kiraro mpivarotra ambongadiny lehilahy, kiraro fivarotana mafana, kiraro fanatanjahan-tena lehilahy
Miomana amin'ny andro feno fahafinaretana eny an-dàlana amin'ny kiraro fitsangantsanganana! Faux hoditra sy harato ambony. Fanakatonana lace-up. Saron-kiraro vita amin'ny fingotra miaro. Voditongotra hisintona. Lela malemy sy vozon'akanjo. Ny lamba manarona miaina dia manome fahatsapana kiraro tsara. EVA midsole dia manome fampiononana maharitra. Outsole outsole dia manome faharetana avo lenta, fitoniana ary fanamafisana ny fampahalalana momba ny vokatra Andininy: 5053 Anaran'ny vokatra: kiraro famolavolana kilasin'ny kiraro mafana mpivarotra ambongadiny lehilahy kiraro ambony: puhetetika syntika, hoditra faux, me ...
Kiraro farany azo itokisana farany amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny kiraro ivelan'ny trano
Ny endrika ambony azo itokisana sy ny fihazonana ivelany ny kiraro fitsangatsanganana an-dàlana dia ho azo antoka fa ny toetr'andro ratsy dia tsy mampihena ny drafitra fitsangatsangananao. Kiraro fitsangantsanganana ambany endrika ho an'ny fivezivezena mampiadana. Mesh mihidy matevina ambony misy fonosana sentetika. Satron-tongotra sy voditongotra synthetic ho an'ny fiarovana bebe kokoa. Fomba fametahana nentin-drazana nentim-paharazana ho an'ny tady tiany. Saron-damba vita amin'ny fofonaina mahavelona hahazoana fampiononana anatiny. Midsole maivana ho an'ny fampiononana maharitra, cushioning ambony ary fiverenana angovo avo lenta. L ...